कम्पनीले कहिले सोशल मिडियामा गोता हाल्नु पर्छ? | Martech Zone
सोमबार, अगस्ट 18, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
कर्पोरेट ब्लगिंग BlogINDIANA सत्रमा हाम्रो कुराकानी धेरै थियो जब एक कम्पनी को सामाजिक मीडिया मा डुबकी लगाउनु पर्छ, कसरी तिनीहरू सोशल मिडियामा डुबुल्की मार्नुपर्छ, र कसरी उनीहरू हुनु पर्छ व्यवस्थापन तिनीहरूको अनलाइन प्रतिष्ठा। आजको पोस्टको लागि, म प्रश्न लिने छु जब.
आज धेरै मानिसहरूले भन्नेछन्, आज! अब! हिजो! म गर्दिन म सुझाव दिन्छु कि सोशल मिडिया र ब्लगिंग एक मार्केटिंग रणनीति होईन, तिनीहरू कर्पोरेट रणनीति हुन्। यो केवल बजार मा आफैलाई बाहिर राख्नु छैन भर्खरको ब्यान्डवगनमा जानुहोस् र उपभोक्ताहरु तपाइँको बगालमा हुनेछन्। सामाजिक मिडिया समय लिन्छ, एक रणनीति र सही संसाधन (दुबै उपकरण र व्यक्ति)।
बाट फोटो AllPosters.
सामाजिक मिडियालाई पारदर्शिता र प्रमाणिकरणको स्तर चाहिन्छ जुन धेरै निगमहरू सहजै छैनन्। कम्पनीहरूले ग्राहकहरुलाई मात्र जवाफ गर्दैनन् - उनीहरूले प्रतिस्पर्धा, उद्योग, सेयर होल्डर, कर्मचारी र सम्भाव्यतालाई जवाफ दिन्छन्। अर्को शब्दहरुमा, सोशल मिडिया ले गर्न सक्छ र तपाइँको कम्पनी मा हरेक विभाग र कर्मचारहरु को प्रत्येक स्तर मा असर गर्नेछ। तपाईं तयार हुनुपर्छ।
यदि तपाइँ वर्डप्रेस ब्ल्गलाई अगाडि बढाउँदै सफल हुन लाग्नुहुन्छ भने, तपाइँ गलत हुनुहुन्छ। तपाईं लाजमर्दो अनलाइन उपस्थितिमा डुबेर जोखिम उठाउनुहुन्छ कि तपाईंले खोल्नको लागि अझ गाह्रो समय हुनेछ तपाईंले आफ्नो खुट्टाको औंलामा नचढाएको भन्दा। एक सामाजिक मिडिया विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नुहोस् जुन बजारमा उपकरणहरूको विविधता बुझ्दछ र कसरी तपाईं प्रत्येकबाट वा सबैको संयोजनबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
तपाइँ तपाइँको कम्पनी मा सबै नेताहरु शामिल गर्नु पर्छ - ती जो आफ्नै कर्पोरेसनको रणनीति। यदि तपाईंसँग समझदारी र शृंखलाको शीर्षबाट इन-इन दुवै छैन भने, बाँकी च्यानलहरू मार्फत पign्क्तिबद्धता विफल हुनेछ। राख्दै तपाईंको सामाजिक मिडिया रणनीतिको मार्केटिंगमा उनीहरूलाई बोर्डरूममा कुञ्जीहरू हस्तान्तरण गर्दैछ - उनीहरूले बिक्री, ग्राहक समर्थन, ग्राहक सन्तुष्टि, शेयरधारक सन्तुष्टि, आदिमा प्रभावलाई चिन्न सक्दैनन्।
म फेरि भन्नेछु, एक सामाजिक जोखिम को लागी सामाजिक मिडिया दायरा मा प्रवेश र असफलता मा प्रवेश नगरेको भन्दा खराब छ।
के यसको मतलब यो हो कि कम्पनीले कहिले पनि सोशल मिडियामा डुबुल्की मार्नु हुँदैन?
हैन ... तर म विश्वास गर्दछु किनकी छ त्यहाँ छ ढिलो अपनाउने अनलाइन प्याटहरू र कम्पनी ग्राहक सम्झौता जस्तो सम्झौताको। के यस सम्झौताको लेखकहरूले केहि कम्पनीहरूले यो जस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्दैन कि बुझ्दछन्?
यो आश्चर्यजनक हो र मलाई अहिले धेरै धेरै राजनेताहरू ट्रेलमा सम्झाउँछन् - तिनीहरू सूर्यको मुनि सबै थोकको स्रोत दिन्छन् जुन वास्तवमै वितरण गर्न सकिन्छ। वास्तविकता यो छ कि बहुसंख्यक कम्पनीहरूले यो जस्तो सम्झौता वहन गर्न सक्षम नहुन सक्छन्! व्यक्तिगत रूपमा, म सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मेरो कम्पनीलाई मन पराउँछु - तर मलाई थाहा छ कि शेयरधारकहरू र नेतृत्वले यसमा बाधा पार्नेछ।
मेरो कम्पनीले ग्रामि-ब्रेकिंग सुविधाहरूमा प्रेस विज्ञप्तिहरू पनि राख्दैन प्रतिस्पर्धाको डरको कारणले। हाम्रो मार्जिन कडा छ, हाम्रो ग्राहकहरु सस्ता छन्, र प्रतिस्पर्धा कडा छ। हुनुमा ढिलाइ अपारदर्शी हामीलाई किनारा प्रदान गर्न सक्छ हामी प्रतिस्पर्धा हुनुभन्दा अघि अर्को ठूलो ग्राहक हडबड गर्न आवश्यक छ। अस्वीकरण: म पूर्ण रूपमा यो रणनीतिमा खरीद गर्दिन तर म बोर्डको अनुभवलाई सम्मान गर्दछु जुन हाम्रो कम्पनी चलाउँछ। आखिर, यो उनीहरूको पैसा हो जुन हामी जूवा गर्दैछौं।
अर्कोतर्फ, सोशल मिडियामा डाइभ नगर्न जोखिम यो हो कि तपाइँको प्रतिस्पर्धा वा आफ्नो असन्तुष्ट ग्राहकहरू (वा नराम्रो ... कर्मचारीहरु) हुनेछ! त्यहाँ कम्पनीहरु को राम्रो उदाहरणहरु छन् जो आलोचना को आक्रमण विफल by उनीहरूको गोप्य पोसाक हटाउने र मैदानमा जम्पि। गर्दै।
अन्ततः, म विश्वास गर्दछु (मलाई आशा छ) सबै कम्पनीहरू आफैंलाई कम्पनी ग्राहक सम्झौताजस्ता सम्झौताको साथ प al्क्तिबद्ध गर्नमा धकेल्नेछन्। मलाई थाहा छ धेरै कम्पनीहरूको लागि, त्यो आज होइन।
भाग २ मा जारी राख्नुहोस्!
टैग: कर्पोरेट सामाजिक मिडियाउद्यम सामाजिक मिडियासामाजिक संजाल
कसरी एक कम्पनी सोशल मीडिया मा डुबकी लगाउनु पर्छ?
अगस्ट 20, 2008 मा 9: 49 AM
१००% जहाँसम्म कर्प फराकिलो खरीदको लागि सहमत छ, विशेष गरी माथिल्लो तहहरूमा, र असफलताको लागतसँग समान। सोशल मिडियामा आधा बेक्ड प्रवेशलाई असफल गर्न PR को लागी एक टन खर्च लाग्छ, र यदि यस समस्याहरूको समाधान गर्ने समस्या समाधान भएन भने, यो सडक तल अर्को रूपमा दोहोरिन्छ। अर्कोतर्फ, त्यस्तो खरीदलाई कम लागतको साथ केहि लागि खरीदको लागि, र नतीजा कम कम कर्पोरेट दृश्यता धेरै गाह्रो हुन सक्छ। यो रडारमा मात्र देखिनेछैन, र जब अगाडि बढ्न सकिन्छ, कुनै पनि हिसाबले यो मुटु र दिमाग प्रतिमान शिफ्ट हुँदैन। कम्तिमा यो राम्रो हुन्छ, जबसम्म केही राम्रो कुरा हुँदैन, वा केहि खराब हुन्छ।
जहाँसम्म ग्राहक कम्पनी सम्झौता जान्छ ... वकिलहरूको साथ फिल्ड दिन हुनेछ। के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ फोन को, एक बीमा कम्पनी, एक उच्च टेक को, वा एक मध्यम आकार निर्माता पनि यी सर्तहरू मा सहमत, तिनीहरूले मान्न को लागी यस्तो को ramifications बुझ्न को लागी, र के गर्न को लागी एक राम्रो प्रकारको मात्र लाग्दैन? यो सिद्धान्त मा धेरै राम्रो सम्भावना छ ... तर शाब्दिक लिईएको छ, वादी वकील, एक प्रतियोगी को लागी, दुवै रणनीतिक जानकारी को लागी, तर पनि भर्ती, र सामान्य मा भर्ती गर्ने को लागी एक महान सम्झौताको बारेमा कुरा।
ग्राहक कम्पनी सम्झौता जरूरी खराब चीज होइन, तर अनावश्यक परिणामहरू निकै महत्वपूर्ण हुन्छन्, जबसम्म यसको केवल एक ओठ सेवा मात्र प्रकारको हुन्छ।